लोकतान्त्रिक समाजवाद कसरी ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
लोकतान्त्रिक समाजवाद कसरी ?
जेष्ठ १६, २०७५ डा. शेखर कोइराला
काठमाडौँ — लोकतान्त्रिक समाजवादी अवधारणाको विकास युरोपका दुई महत्त्वपूर्ण क्रान्तिबाट भएको हो । सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक विचारले समाजको चाहनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ भने युरोपेली औद्योगिक क्रान्तिले श्रमजीवी वर्गको भूमिकाको सबलीकरण र उनीहरूको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको स्थापना गर्छ ।
औद्योगिक क्रान्तिको सुरुका दिनमा श्रमजीवी वर्गका भावनालाई गौण गरिँदा त्यसले उनीहरूको जीवनमा नकारात्मक असर परी गरिबी बढाउने काम गरेको थियो । यस समस्यालाई समाधान गर्न समानता र न्याय (समता र अवसरमा समानता) को अवधारणा विकसित गरिएको देखिन्छ । यस अवधारणाअनुसार विभेदपूर्ण र अन्यायपूर्ण अवस्थालाई समानताले हटाउने र श्रम शोषणको अन्त्य हुने मान्यता राख्थ्यो ।
विश्वका केही पुँजीवादी देशहरूले समाजवादी नीतिसंँगै उदार आथिक नीतिको अभ्यास गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा २० औं शताब्दीको अन्त्यसम्म आइपुग्दा उदारवादी नीतिका घोषित उद्देश्य जस्तै– आर्थिक क्षमताको अभिवृद्धि गर्न नसक्दा बढ्दो बेरोजगारी र गरिबीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् । फलस्वरूप उक्त नीतिमा पुन:व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण भयो । एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भसँगै सामाजिक न्याय, समानता र सहअस्तित्व जस्ता लोकतान्त्रिक समाजवादका परम्परागत अवधारणालाई पर्यावरणीय, आत्मानुभूति, स्वतन्त्रता, समावेशिता र सांस्कृतिक पहिचानजस्ता उत्तर भौतिकवादी मुद्दा प्रगतिशील सूचकका रूपमा आएका छन् ।
समाजवाद एक राजनीतिक र आर्थिक दर्शन हो । नेपालमा जननायक बीपी कोइरालाको सरकारले पहिलोपटक समाजवादी नीति लागू गरेको हो । उक्त समाजवादी नीति नेपाली माटो सुहाउँदो थियो । समाजवादी अवधारणा लागू भएको धेरै समय भइसकेको छ । तर समाजवादका लक्ष्यको नेपालमा वास्तविक प्रयोगको अवस्था र त्यसको आर्थिक, सामाजिक प्रभाव हेर्नु आवश्यक छ ।
सर्वप्रथम देशले अवलम्बन गरेको आर्थिक प्रणाली समाजवाद उन्मुख छ/छैन भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ । नेपालको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् भने अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । देशको कुल जीडीपीको ३० प्रतिशत रेमिट्यान्सको योगदान छ । दुई तिहाइ जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ भने कृषि प्रणालीले कुल जीडीपीको करिब एक तिहाइमात्र योगदान गर्छ । त्यसैगरी उद्योगको १३.५ प्रतिशत योगदान छ भने बाँकी योगदान सेवामूलक क्षेत्रहरूबाट भएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनमा नै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवाद स्थापना गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । संविधानत: स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हो । नयाँ संविधानको घोषणासँगै संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण (तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न) को संविधान कार्यान्वयनको काम पूरा गरी नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादको लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुन संरचनाहरू पनि खडा भएका छन् । देशको आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दै केन्द्रीय सरकारले समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ हुने राजनीतिक–आर्थिक मनसाय पनि व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि विविधतालाई समायोजन र एकतामा रूपान्तरण गर्न प्रक्रियागत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण नै छन् ।
जनसङ्ख्याको सामाजिक–आर्थिक सूचकांकहरू समाजवाद स्थापनाका निम्ति थप चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोषले तयार गरेको बहुसूचकांक सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार २० प्रतिशत घरपरिवार अति गरिब वर्गमा पर्छन् भने थप २० प्रतिशत घरपरिवार गरिब वर्गका छन् । त्यसैगरी २० प्रतिशत घरपरिवार मध्यमवर्गीय छन् भने थप २० प्रतिशत उच्च मध्यमवर्गीय छन् । यसैगरी २० प्रतिशत घरपरिवार धनी अन्तर्गत पर्छन् । उपरोक्त तथ्यांकका आधारमा ४० प्रतिशत घरपरिवारले कुनै न कुनै प्रकारको अभावको सामना गर्नु परिरहेको देखिन्छ । प्रादेशिक दृष्टिले प्रदेश नं. २, ६ र ७ गरिबी र मानव विकासका सूचकांकले समस्याग्रस्त नै छन् । देशको ४० प्रतिशत गरिब घरपरिवारलाई कम्तीमा पनि मध्यमवर्गीय घरपरिवारको अवस्थामा पुर्‍याउनु र मानव विकास सूचकांकका दृष्टिले ०.४२ भएका तीनै प्रदेशहरू (२, ६ र ७) लाई कम्तीमा ०.५१ मा पुर्‍याउनु लोकतान्त्रिक समाजवादको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसका निम्ति क्षणिक लोकप्रिय र वितरणमुखी कार्यक्रमभन्दा धरातलीय यथार्थमा आधारित आर्थिक–सामाजिक नीति तथा कार्यक्रम र दूरगामी राजनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको कर प्रणालीलाई विश्लेषण गर्दा ७२–७७ प्रतिशत कर अप्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत उठाइन्छ भने बाँकी प्रत्यक्षबाट । यसको अर्थ अनुमानित कुल १२ खर्ब करबाट प्राप्त आम्दानीमा लगभग ७ खर्ब अप्रत्यक्ष करबाट आएको देखिन्छ भने बाँकी अनुमानित ५ खर्ब प्रत्यक्ष करको माध्यमबाट आएको पाइन्छ । तुलनात्मक रूपमा कर प्रणालीमा सुधार हुँदै आए तापनि आजको सन्दर्भमा समाजवाद स्थापनाको चुनौतीलाई सामना गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीमा जानुपर्ने देखिन्छ । यसका निम्ति उत्पादनका क्षेत्रहरू जस्तै– कृषि, उद्योग, पर्यटन, वन र ऊर्जामा प्राथमिकता दिनुपर्छ र करमा विशेष छुट दिई न्यून आय वर्गलाई मध्यम आय वर्गमा परिणत गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादन वृद्घिका निम्ति अनुदान र सिंचाइका साथै बजार व्यवस्थापन राज्यले नै गर्नुपर्छ । त्यसैगरी उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न राज्यले जग्गा, सडक र बिजुलीको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । अहिलेको कर प्रणालीले उद्योगमा अधिक कर र व्यक्तिका सम्पत्तिमा न्यून करको व्यवस्था गरेको छ । यसलाई ठीक विपरीत दृष्टिले करको निर्धारण हुनुपर्छ । अर्थात् उद्योग र व्यक्तिगत सम्पत्ति (आवश्यक प्रयोजन लागि) मा न्यून कर र व्यावसायिक दृष्टिले निर्माण गरेका घर तथा जग्गामा अधिक कर व्यवस्था हुनुपर्छ । जस्तै– कुनै एउटा व्यक्तिको एउटामात्र घर छ भने त्यो सामान्य करको दायरामा हुनुपर्छ भने एकभन्दा बढी घर छन् भने ती घरहरूलाई अधिक करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । समाजवाद स्थापनाका लागि बहुकर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । दैनिक उपभोग्य सामानहरूमा करको दायरा फरक हुनुपर्छ । अर्थात दैनिक उपभोग्य सामानमा राज्यले अनुदान दिएर भए पनि सस्तो र सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ भने सम्पन्नहरूलाई बढी कर लिएर त्यसलाई गरिब लक्षित कार्यक्रमहरूमा उपयोग गर्नुपर्छ । यसले जनताको क्रयशक्ति वृद्वि भई व्यापारिक लगानीमा समेत योगदान पुग्न सक्छ ।
समाजवाद स्थापनाका लागि बहुकर प्रणाली आवश्यक देखिन्छ । क्षेत्रगत रूपमा जीडीपीको योगदानलाई बढाउन कृषि, उद्योग र सेवामूलक क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । अप्रत्यक्ष कर प्रणालीको न्यूनीकरण र प्रत्यक्ष कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख बनाउन सकिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणाली र लोकतान्त्रिक समाजवादको नकारात्मक सम्बन्ध हुने भएकाले प्रगतिशील कर प्रणालीतर्फ जोड दिई मूल्य अभिवृद्धि करलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्छ ।
समाजवादका निम्ति प्रगतिशील समाजवादी संस्कृति हुनुपर्छ । यसका निम्ति सामाजिक सुरक्षाका विविध आयाम सुदृढ हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्ध भत्ता, स्वास्थ्य बिमा, बेरोजगारी भत्ता, बाल विकास भत्ता आदिमा आर्थिक अवस्थाका आधारमा वितरण गर्नुपर्छ । उपरोक्त सामाजिक सूचक एवं स्वास्थ्य बिमालाई समान पहुँचका निम्ति प्रगतिशील कर प्रणाली लागू भएकै हुनुपर्छ । करको प्रकृति, संरचना, दर र आधारहरूको व्यवस्थाले कर कस्तो प्रकारको हो भनी निर्धारण गर्छ । सबैभन्दा निम्न वर्गका जनताको स्वास्थ्य बिमा सरकार स्वयंले गरिदिनुपर्छ भने अन्यका हकमा ५० प्रतिशत बिमा रकम जनताले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादनको वृद्धि र उपल्लो वर्गबाट बढी कर लिई कल्याणकारी नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप आर्थिक–सामाजिक रूपमा बहिष्करणमा परेकाहरूलाई समुन्नत गर्दै लैजाँदा समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुन्छ ।
समाजवादका निम्ति स्रोतको दीर्घकालीन व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । देशसँग उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नु आवश्यक छ, जस्तै– जमिन, वन र पानीका स्रोतहरू दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय असर नपार्ने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपालले ४२,००० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ । त्यसैगरी कृषि उत्पादन बढाउनसकेको अवस्थामा आयातलाई कम गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी उदार आर्थिक नीतिअन्तर्गतको पुँजीवादलाई कसरी समाजवादी आर्थिक नीतिअन्तर्गत समुन्नत बनाउने भन्ने कुराले पनि महत्त्व राख्छ । विश्वव्यापीकरणसँगै पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले निर्माण गरेको गरिब र धनीबीचको दूरीलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषय पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको पछिल्लो तथ्यांकहरूले धनी र गरिबबीचको दूरी बढ्दै गइरहेको देखाउँछ । तसर्थ व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अहिलेको नाम मात्रको खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन गरी परिणाममुखी कार्यमा खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । उदारवादी नीतिअन्तर्गतको निजीकरण गर्ने प्रमुख विधिमा परिवर्तन गरी जनता र राज्यको संयुक्त लगानी अवधारणालाई अगाडि बढाउन सके समाजवादी अर्थतन्त्रतर्फ राज्यलाई उन्मुख गराउन सकिन्छ ।
अन्त्यमा, नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवाद आवश्यक छ । तर यसका पूर्वसर्तहरू अनिवार्य छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादका पूर्वसर्तहरूलाई विश्लेषण गर्दा राजनीतिक विकृतिको नियन्त्रण र नियमन, अर्थतन्त्रमा क्रोनिक पुँजीवादको प्रभाव न्यूनीकरण, शिक्षाको व्यापारीकरणमा न्यूनीकरण, बजारमा सरकारको नियन्त्रण र नियमन, स्वतन्त्र एवं जनमुखी पत्रकारिता, धार्मिक स्वतन्त्रता, दुई तिहाइ जनसङ्ख्याको कृषि उत्पादनमा निर्भरता र यसको वैज्ञानिक एवं आधुनिकीकरण, उद्योगको विस्तार एवं नयाँ रोजगारीको सिर्जना, जल संसाधनको भरपुर प्रयोग र पर्यटनको आधुनिकीकरण तथा विस्तार आदिमा ठोस कार्यक्रम ल्याउन सके समाजवादको यात्रा सहज हुने देखिन्छ ।
पार्टी बचाउन अग्रिम महाधिवेशन
जनताले हामीलाई सुध्रिने अवसर दिएका छन् । यसलाई हामीले सही ढंगले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
फाल्गुन २२, २०७४ डा. शेखर कोइराला
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणामपश्चात देश नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको कम्युनिस्ट गठबन्धन नै नेपाली कांग्रेसका निम्ति चुनौती बन्यो । नेपालको राजनीतिमा यतिबेला चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ, केका लागि थियो, कम्युनिस्ट गठबन्धन ?
केवल निर्वाचन प्रयोजनका लागि ? वा उनीहरूले भनेअनुसार पार्टी एकीकरणमार्फत साम्यवादतर्फ अबको गन्तव्य ? यो विषय अझै अन्योलमा छ । चुनावी अभियानका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिएका अभिव्यक्ति अनुसार नै उहाँहरू अगाडि बढ्ने हो भने देश एकदलीय निरंकुश साम्यवादमा प्रवेश गर्ने खतरा छ । कतै प्रजातन्त्र खोसिने त हैन भन्ने चिन्ता र चासो सर्वत्र छ । कांग्रेस, जसले जीवनभर प्रजातन्त्रको स्थापना र सम्बद्र्धनका लागि लड्यो, उसको काँधमा पुन: थप जिम्मेवारी आएको छ ।
कांग्रेस हार्नुका कारण
हरेक ६ महिनामा सरकार परिवर्तनको समस्याले आक्रान्त बनेका थिए, नेपाली जनता । जनताले स्थायी सरकार चाहे । त्यसैको प्रतिफल हो, अहिलेको निर्वाचनको परिणाम । कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत ढंगले अगाडि लैजान र जनतासामु प्रचार गर्न सकेन । आफ्नै पार्टी नेतृत्वले गरेका जनमुखी कामहरूलाई जनतासामु पुर्‍याउन नसक्दा यो अवस्था आयो । पछिल्ला दिनहरूमा जनतासँग कांग्रेसको प्रत्यक्ष संवाद नै हुनपाएन । जनताले वास्तविक कांग्रेस बुझ्ने मौका नै पाएनन् ।
देश संघीय संरचनामा गइसक्दा समेत हामीले पार्टीको प्रदेश संरचना बनाउनसकेका छैनौं । पार्टीभित्र गुटबन्दी र भागबन्डा ब्याप्त छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने परिपाटी कायम छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको टिकट वितरणमा भएको विभेद र मनोमानीलाई हामीले समयमै सम्बोधन गर्न सकेनौं । जसले गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको मनमुटाव पछिल्लो निर्वाचनसम्म कायम रह्यो । हामी गर्व गर्छौं कि हामीसँग यति लाख क्रियाशील सदस्यता छ भनेर । तर हामीले भोटरलाई क्रियाशील सदस्य बनाएका रहेछौं । ती क्रियाशील सदस्यले मेरो दायित्व र हैसियत के हो भनेर कहिल्यै बुझेनन् । चिया पसलमा बसेर एक पक्षले अर्को पक्षलाई गाली गर्ने परिपाटी पछिल्लो निर्वाचनमा झनै क्रियाशील भएको देखियो । पार्टी सञ्चालन र संगठनबारे कहाँ–कहाँ कमजोरी भयो भनेर कहिल्यै समीक्षा र विश्लेषण गरिएन । जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ र नगरको पार्टी संगठन कसरी चलेको छ र त्यहाँका कार्यकर्ताको अवस्था कस्तो छ भनेर एकदिन चासो दिने काम भएन । सत्तामा बस्दासमेत दूरदराजका कार्यकर्ताको अवस्थाबारे नेतृत्व पंक्तिबाट सोधीखोजी भएन ।
पराजयको अर्को कारण– वाम गठबन्धनलाई हामीले सतही रूपमा मात्र लियौं । जसरी चनाखो र संवेदनशील हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेनौं । निर्वाचनका मुखमा भएका केही घटना– प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति, प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग, राजदूत नियुक्ति जस्ता प्रकरणले कांग्रेसको छविमा दाग लाग्न पुग्यो । त्यही दाग स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका निम्ति अभिशाप बन्न पुग्यो । त्यस्तै चितवन–भरतपुर प्रकरण जहाँ स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस कार्यकर्तालाई हँसिया–हथौडामा भोट हाल्न बाध्य बनाइयो, अनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा हलोमा भोट हाल भनियो । यो घटनाले कांग्रेसको ‘चेन अफ कमाण्ड’ टुट्न पुग्यो र देशभरका कार्यकर्तामा एक प्रकारको नैराश्य उत्पन्न भयो । र आज चितवनका कार्यकर्ता सोध्दैछन्, अब हुने निर्वाचनमा कुन चिन्हमा मतदान गर्ने ?
छिमेकी मुलुक भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई नाकाबन्दीसमेत भन्न सकेन र जनचाहना बमोजिम काम गर्न सकेन । प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) हरू नियुक्ति गर्दा कांग्रेसको मधेसी समुदायभित्र योग्य व्यक्तिहरू नै नभएजस्तो गरी उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरका पार्टीलाई मधेसी कोटाको गभर्नर दिइयो, जसको कारण मधेसी समुदाय कांग्रेसबाट विस्तारै टाढिन पुगे । अर्कातिर जसरी लोकतान्त्रिक गठबन्धनबारे चर्चा गरियो, त्यो केही थिएन र त्यसले सार्थकता प्राप्त गर्न सकेन । केही अमूक पार्टीका अमूक व्यक्तिको अनुहार हेरेर गरिएको गठबन्धनले कांग्रेसलाई कुनै पनि फाइदा हुनसकेन । केही निर्वाचन क्षेत्रमा साना दलका शीर्ष नेताहरूलाई समर्थन गर्दै कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएन, तर बाँकी सबै ठाउँमा उनीहरूले कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई हराउन मद्दत गरे ।
‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली–२०७४’ मार्फत संवैधानिक निकायसरह रहेका अति संवेदनशील मानिने– राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याउने तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने निर्णयले कांग्रेसलाई झस्काएको छ । कतै यो नै साम्यवादी व्यवस्थाको प्रस्थानबिन्दु त हैन ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यदि कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार मुलुकमा एकदलीय निरंकुश साम्यवादी व्यवस्था स्थापना उन्मुख हुने हो भने लोकतन्त्रको रक्षार्थ कांग्रेसले जतिसुकै ठूलो मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्छ । तर लोकतन्त्रको रक्षाका लागि कांग्रेसले कसैसँग कुनै सम्झौता गर्दैन । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने त्यसमा हाम्रो विरोध रहँदैन । कांग्रेसले सरकारको गुण र दोषका आधारमा उसका बारेमा धारणा बनाउनुका साथै कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार संविधानसम्मत चलेको छ कि छैन भन्नेतर्फ निरन्तर खबरदारी गर्छ । सरकार लोकतान्त्रिक मर्म, भावना र आदर्शलाई कुल्चेर अगाडि जान खोजे कांग्रेसलाई त्यो कदापि मान्य हुँदैन । केही समय सत्ता बाहिर बस्दैमा कांग्रेसलाई केही असर गर्दैन । प्रतिपक्षमा बसेर जनताका जनजीविकाका मुद्दाहरू उठाउँदै जानुपर्छ ।
१३ औं महाधिवेशनपछि पार्टी अत्यन्त कमजोर बन्न पूग्यो । महाधिवेशन सकिएको २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन र पार्टीका पदाधिकारीहरू चयन हुनसकेको छैन । पार्टीका विभागहरू गठन हुनसकेको छैन । ‘व्यक्तिभन्दा माथि विधिमात्रै सर्वोपरी हुन्छ’ भन्ने कुरा नेतृत्व पंक्तिले बुझेन । पार्टी संस्थागत ढंगले चल्नसकेको छैन । एकाध व्यक्तिको दम्भ र लहडले पार्टी चलेकै कारण आज यो परिणाम भोग्नपरेको हो । नेतृत्वले गर्ने हरेक निर्णय र क्रियाकलाप विधान विपरीत थियो । विधानलाई बेवास्ता गर्दा स्वेच्छाचारी बढ्न गयो र संगठन कमजोर बन्न पुग्यो । त्यस्तै गुटगत राजनीतिले दूरदराजमा बस्ने इमानदार र त्यागी कार्यकर्ताको अवमूल्यन गरियो । जसका कारण क्षमतावान, त्यागी र इमानदार व्यक्तिहरू सधैं अपहेलित र उपेक्षित भएर बस्नुपर्‍यो । पार्टीका महत्त्वपूर्ण भ्रातृ संगठनहरू निष्क्रिय छन् र सक्रिय भएकाहरू पनि गुटबन्दी र भागबन्डामा रमाइरहेका छन् । गएका कुनै पनि निर्वाचनमा यिनीहरूको प्रभावकारी भूमिका कहीं कतै देखिएन । पार्टी नेतृत्वले निर्वाचनमा पार्टी हारेको होइन, व्यक्ति हारेको हो भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसले आम कार्यकर्तामा नैराश्य छाएको छ । यसले गर्दा संगठन झन् कमजोर बन्दै गएको छ । पार्टी नेतृत्वमा व्यक्तिवादी चरित्र हावी भएकै कारण यति लज्जास्पद हारको सामना गर्नुपरेको कसैबाट छिपेको छैन ।
निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो । यसको परिणामलाई सहज रूपमा स्वीकार्दै अगाडि जानुको विकल्प छैन । जनताले हामीलाई दोस्रो ठूलो दल बनाएर प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएका छन् । सोही म्यान्डेटलाई आत्मसात गर्दै मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार बन्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । पार्टीले इतिहासकै ठूलो क्षति व्यहोरेको छ । यो क्षतिको भागिदार हामी सबै हौं । एकले अर्कालाई दोष लगाएर उम्कन सक्ने अवस्था छैन । यस विषयमा को–कोबाट कहाँ–कहाँ त्रुटि र कमजोरी भयो ? त्यसको गहन र विस्तृत रूपमा छलफल र विश्लेषण गरिनुपर्छ । केन्द्रदेखि गाउँ र नगरसम्म यसको समीक्षा र विश्लेषण गरिनुपर्छ । पराजयको परिणाम हेरेर निराश भई बस्ने हो भने त्यो अर्को भुल हुनेछ । अब पार्टीले गाउँलक्षित कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । राजधानी र सहर केन्द्रित पार्टीका आम कार्यकर्तालाई स्थानीय स्तरमै गएर पार्टी संगठन गर्ने अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ । हैकमवादी सोच र परम्परागत ढंगबाट अब पार्टी चल्न सक्दैन । जनताले हामीलाई सुध्रिने अवसर दिएका छन् । यसलाई हामीले सही ढंगले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
जिल्ला एवं गाउँका कार्यकर्ताहरूले यो निर्वाचनको परिणामबाट निराश हुनुपर्ने छैन । एकपटक निर्वाचन हार्दैमा आकाश खस्दैन । तल्लो तहका जनतासँगको प्रत्यक्ष संवाद अगाडि बढाइनुपर्छ । बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गर्नुभएको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादलाई समय–सापेक्ष पुनव्र्याख्या र पुनर्परिभाषित गरिनुपर्छ । त्यही डकुमेन्ट लिएर हामी जिल्ला र गाउँबस्तीहरूमा आउँछांै । तपाईहरूसँग साक्षात्कार गर्छौं । तपाईहरूका हरेक समस्या समाधानमा दत्तचित्त भएर लाग्छौं । अनि तपाईहरूको विचार सुझावलाई आत्मसात गर्दै आगामी महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई समय–सापेक्ष, गुट र भागबन्डारहित पार्टी बनाउँछौं । गुट र भागबन्डाको खेती गर्ने र त्यसकै चौघेरामा रमाउनेहरूलाई आगामी महाधिवेशनबाट परास्त गर्छौं । यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो । कुनै पनि व्यक्तिले अपमानित भएर बस्नु नपर्ने पार्टी निर्माण गर्छौं । यसका लागि सबै तहका कार्यकर्ता, पार्टीका बौद्धिक समुदाय, विभिन्न तह र तप्कामा बसेर कांग्रेसलाई माया गर्नुहुने आम समुदाय र समूहको सहयोग हाम्रालागि अपरिहार्य छ ।
संगठनका सवालमा हामी अत्यन्त कमजोर छौं । यसैको उदाहरण हो, पछिल्लो तीनवटा (स्थानीय, प्रदेश र संघ) निर्वाचनको परिणाम । युवाहरूलाई केही निश्चित समयका लागि ग्रामीण भेगमा सक्रिय गराएर पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । पार्टी, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संगठनका सबै तहका कार्यकर्ताहरूलाइ निश्चित समयका लागि संगठनमा सही ढंगले परिचालन र तिनको मूल्यांकन गरिनुपर्छ । यसका लागि पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ । हो, कुनै विलम्ब नगरी कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइनुपर्छ । केन्द्रीय समितिको बैठकबाट लिखित निर्णय गरेर महासमिति बैठक बोलाउनुपर्छ । महासमितिको बैठकमा पार्टी संगठन एवं स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबारे गहन र विस्तृत छलफल एवं विश्लेषण गरिनुपर्छ । पदाधिकारी थप्ने र विभाग बनाएर टालटुले नीति लिई समस्या समाधान हुनसक्दैन । विधानलाई ब्यापक संशोधनमार्फत संघीय संरचनामा लैजान जरुरी छ । त्यसपछि छिटोभन्दा छिटो १४ औं महाधिवेशनमा जानुपर्छ । पार्टी बचाउन र गिरेको साख फर्काउन यसभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग छैन ।
कोइराला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन २२, २०७४ ०७:३४